» Riinka Ka Baxa Dumarka Xiliga Galmada Oo Raga ay Ka Helaan Raaxo Waali ah
Ragga ayaa la ogaaday in ay raaxo waali ah ka helaan codka hoose ee loo yaqaan riinka
kaasoo ay sameeyaan dumarka Xiliga loo diyaar garoobayo galamada oo ay
socato baashida ama istiminta.
Dumarka intooda badan ayaa aaminsan in ay ceeyb tahay haddii ninkeedu
uu maqlo iyadoo sameeneyso codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ka dhasha Macaansiga baashida ama galmada ,balse ay ragu ay ka helaan dareen xoogan oo dhaliya in uu kordho jaceylka uu qaadayo Lamaanihiisa.
Anonymous12/05/2012MAXAAN KUDHIHI KARAA QOFTAY HADII ANAY ISIIMAY REENKA AMA GUUXAReplyDeleteAnonymous12/24/2012Aad ayaad u mahadsantay marka hore. Waxaan filayaa arintani aad ayay Muhiim u tahay inay ogaadaan dumarka somaaliyeed. Waayo sidaad sheegtay waxay kordhisaa maacaansiga ninka, dareenkiisana aad ayay kor ugu qaadaa. Waxaan ku dari lahaa oo kale, nimanku waxay ka ciyaari karaan door muhiim ah inay ku dhiiri galiyaan dumarkoodu inay u sameeyaan waxaa ay jecel yihiin. Tusaale ahaan, inaad ku tidhaa lamaanahaaga 'waxaan aad u jeclay markaad sidaa samayso' ama aad codkaaga riinka I maqashiiso. Taaasi waxay u fududayn kartaa inay labada qof is fahmaan, bartaana waxa uu midiba midka kale ugu raaxayn karo. Gaar ahaan nimanka ayay tahay inay dadaal dheeraad ah sameeyaan si ay u kasbadaan kalsoonida boqoradiisa.Waa mahadsantihiin.ReplyDeleteAdd commentLoad more...